ကုန်ပစ္စည်းသုံးသပ်ချက်များ | သြဂုတ်လ 2021
2021 | တင်ပို့ Paul Adams | အမျိုးအစား: ကုန်ပစ္စည်းသုံးသပ်ချက်များ
ဥယျာဉ်ဒူးထောက်၊ ဖျာများနှင့်ထိုင်ခုံများသည်သင်၏ဒူးကိုရေရှည်တွင်နာကျင်မှုများစွာသက်သာစေသည်။ ဒီနက်ရှိုင်းတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဥယျာဉ်ဒူးထောက်ရှာပါ။
နောက်သို့အမြစ်မှို Kit ပြန်လည်သုံးသပ်
Back To The Roots မှမှိုကိရိယာအစုံအလင်ကိုဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်သင်၏အိမ်ရှိမှိုများကိုစတင်စိုက်ပျိုးရန်သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးဖြစ်သည်။
Hydroponics အတွက်အကောင်းဆုံး pH မီတာ (၁၀) ခု
သင်၏ Hydroponic ကြီးထွားမှုအတွက်အကောင်းဆုံး pH မီတာကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်ကျသော ၀ ယ်သူ၏လမ်းညွှန်ကသင့်အားမှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Aquafarm ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ငွေသည်တန်ဖိုးရှိသလား။
AquaFarm သည်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်တွင်အထုပ်ထဲတွင်ပါသည့်အရာများ၊ ၎င်းသည်ကြီးထွားရန်မည်မျှအလုပ်လုပ်သည်နှင့်ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသောပြproblemsနာများပါ ၀ င်သည်။
ဥယျာဉ်၊ ဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်နာများအတွက်အကောင်းဆုံး 19 Landscaping Books
Landscaping books များသည်လှုံဆော်အားပေးမှုနှင့်သင်ကြားပို့ချမှုနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်သည်။ သင်မည်သူပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ဤရှုခင်းဒီဇိုင်းစာအုပ်သည်သင်၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးဓာတ်မြေသြဇာဖြန့်ဖြူးသူများ: အသံလွှင့်ခြင်း၊ ချခြင်း၊ လက်ဖြင့်ကိုင်ခြင်းနှင့်နောက်ကွယ်မှ
(မြက်ခင်းသို့မဟုတ်မျိုးစေ့ဖြန့်သူများဟုလည်းသိကြသော) ဓာတ်မြေသြဇာဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်အသုံးဝင်သောကိရိယာများဖြစ်သော်လည်း ၀ ယ်ရန်ရှုပ်ထွေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်သူ၏လမ်းညွှန်သည်သင်သိထားသင့်သမျှကိုပေးသည်။
အပင်များအတွက်အကောင်းဆုံး Hydroponic နှင့် Aeroponic Cloning Machine များ
အပင်ပွားများသည့်စက်များသည်ပြန့်ပွားမှုကို ပို၍ လွယ်ကူစေသည်၊ အကောင်းဆုံးသောစက်များကမူပကတိလေပြေလေညင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ငါးကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်, ဒီမှာအကောင်းဆုံးစက်ရုံ cloners ဖြစ်ကြသည်။
အကောင်းဆုံးဂျပန်ဥယျာဉ်ဓါး (Hori-Hori Knives)
တစ်ခါတစ်ရံတွင်အရိုးရှင်းဆုံးကိရိယာများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာတစ်ခုကတော့ Hori-Hori ဂျပန်ဥယျာဉ်ဓားဖြစ်သည်။
Hydroponics အတွက်အကောင်းဆုံးလေပန့် ၆ ခု
သင်၏ Hydroponic system ကိုအောက်စီဂျင်ပြုခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးပြီးကောင်းမွန်သောလေစုပ်စက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်ယူသူ၏လမ်းညွှန်တွင် Hydroponics အတွက်အကောင်းဆုံးလေပန့် ၆ ခုကိုရှာပါ။
2021 ခုနှစ် 10 အကောင်းဆုံး chipper ဖျက်စီးမော်ဒယ်များ
အကောင်းဆုံး chipper ဖျက်စက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလောကတွင်ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်သူ၏လမ်းညွှန်ကသင့်အားအကောင်းဆုံးသောမော်ဒယ်များကိုပြသထားသည်။
2021 အတွက်အကောင်းဆုံး Tiller Models 8: ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်
အဘယ်အရာကိုမျှအသစ်စက်စက် tilled ဥယျာဉ်တော်ကဲ့သို့ကျေနပ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်၌အကောင်းဆုံးသောထွန်စက်များမရှိပါက၎င်းတို့သည်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်စေ၊ လျှပ်စစ်ဖြစ်စေ။ သင်ဒီမှာသိဖို့လိုအပ်သမျှကိုလေ့လာပါ။
အရွက်များကိုရိတ်ခြင်းသည်သင်အကောင်းဆုံးအရွက်သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်ထွန်ခြစ်ခံသရွေ့ကြောက်လန့်စရာမလိုပါ။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ထိပ်တန်း rake ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကြည့်ပါ။
10 အကောင်းဆုံးအဆောက်အ ဦး အပြင်သိုလှောင်ရုံ: အသေးစား, အကြီးစား, ဒေါင်လိုက်, & သံမဏိ!
12 အကောင်းဆုံးအဆောက်အ ဦး အပြင်နေရောင်ခြည်အလင်းများ - The Night Brighten
အကောင်းဆုံးပြင်ပနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဘယ်လောက်လဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်သူ၏လမ်းညွှန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ၁၂ ခုကိုပြသပြီးသင်ရွေးချယ်ရန်သတင်းအချက်အလက်တန်ချိန်များစွာကိုလည်းပေးသည်။
2021 အတွက်အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်ဝက်အူလှိုင်း - မည်သည့်နေရာတွင်ရှာဖွေရမည်နှင့်မည်သည်ဝယ်ရမည်နည်း
အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်ဝက်အူရှာကိုရှာဖွေရန် မင်းကံကောင်းနေတယ် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုအတွက်သင်သိထားသင့်သည့်အချက်အလက်များနှင့်ကောင်းမွန်သောလက်ရှိရွေးချယ်မှုများအတွက်ပြည့်စုံသော ၀ ယ်သူ၏လမ်းညွှန်အချက်အလက်များကျွန်ုပ်တွင်ရှိသည်။
2021 ခုနှစ်6အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်နှင်းမှူမော်ဒယ်များ
အွန်လိုင်းဥယျာဉ်မှလက်ဆောင်များ၏အကောင်းဆုံးစာရင်း - အဆင့်မြင့်နည်းပညာဥယျာဉ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စာအုပ်များ၊ ကိရိယာများ၊ အစေ့များ၊ အပင်များနှင့်အခြားအရာများမှဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ကူးများအသစ်နှင့်အတူ updated!
အကောင်းဆုံးမြေဆီလွှာအတွက်အကောင်းဆုံးမြေဆီလွှာ ၁၀ ခု
ကြီးထွားလာသောပဲဟင်း - ပရိုတိန်းထုပ်ပိုးထားသောပဲပင်များ
အကောင်းဆုံးဆွေးသာမိုမီတာ: ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း6ရွေး
26 သင်၏ဆောင်းရာသီဥယျာဉ်အတွက် Cold Frame အစီအစဉ်များ
နွေရာသီရှည်လျား Alpine စတော်ဘယ်ရီကြီးထွားလာ